ကျနော်နှင့် သတင်းထောက်အလွဲ | ဥက္ကာကိုကို
Posted in: သရော်စာ, ဟာသများ, ရောက်တတ်ရာရာ.	Leaveacomment
သရက်ထောင်ဘူးဝမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ လွတ်တဲ့နံနက်ခင်း။ ကင်မရာတွေတဖျပ်ဖျပ်။
သတင်းထောက်တွေ ရီကော်ဒါတကိုင်ကိုင်။ မိသားစုဝင်တွေ၊ လာကြိုသူတွေ လည်ပင်းတရှည်ရှည်။
မကြာမီ လွတ်မြောက်သူများ ထွက်လာသည်။ အပြင်ရှိလူများနှင့် လွတ်လာသူများ ရောထွေးသွား။
သတင်းထောက်များ ခြေရှုပ်ကြ။ ၀မ်းသာအားရဆူညံအော်ဟစ်ကြ။ ကင်မရာတွေ တဖျပ်ဖျပ်။
လွတ်လာသူများကို အလုအယက်မေးမြန်း။ မောင်ဥက္ကာလည်း ရီကော်ဒါလေးကိုင်ပြီး လွတ်လာသူ
တွေကို အင်တာဗျူးရန်ပြင်။ အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ဆွဲကာ ဘူးဝအနီးထိုင်နေသူတစ်ဦးနား ကပ်သွား။
ကြည့်ရတာ သနားစရာ။ ဘယ်သူမှလာမကြိုဘူးထင်ပ။ အားငယ်နေမှာဘဲ။
““အခုလို အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ””
““ဟုတ်…. အကို ဒီသရက်ထောင်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်နှစ်နေခဲ့ရလဲ””
““အာဂျာ… ကျနော် တစ်ခါမှထောင်မကျဖူးပါဘူးဂျာ… မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။
မိဘကို လုပ်ကျွေးနေတာပါဂျာ… ကျိန်ဆိုကျိန်ရဲပါတယ်ဂျာ… လိမ်လည်မှုနဲ့ ကျသွားတဲ့
သူငယ်ချင်းပြန်လွတ်မယ်ဆိုလို့ လာစောင့်နေတာပါဂျာ….. ဟင့်””
သေပြီချရာ။ မောင်ဥက္ကာလွဲပြန်ဘီ။ သွားကလေး ဖြဲပြလိုက်ပြီး —
““မတိလို့နော် အကိုကြီး… ဆောရီးနော်… သွားလိုက်ဦးမယ်နော်… နောက်မှတွေ့မယ်နော်…
← ပုံပြင်လေး (၃)
ကျနော်နှင့် လူငယ်အလွဲ →